Ama-Pirate Metrics: I-Actionable Analytics Yokubhaliselwe | Martech Zone
Ama-Pirate Metrics: I-Actionable Analytics Yokubhaliselwe
NgoLwesibili, Januwari 22, 2013 Douglas Karr
Siphila ezikhathini lapho kuba lula khona futhi kube lula ukwenza izixazululo zakho. Amathuluzi amaningi endabuko akwi-Intanethi akhiwe ngenkathi ehlukile - lapho i-SEO, ukumaketha kokuqukethwe, imithombo yezokuxhumana, i-ajax, njll. Kepha sisaqhubeka nokusebenzisa amathuluzi, sivumela ukuvakashelwa, ukubukwa kwamakhasi, ukubhampa futhi kuphume ifu ekwahluleleni kwethu singazi ukuthi empeleni zinomthelela entweni engezansi yini. Amamethrikhi abaluleke kakhulu awatholakali ngisho futhi adinga ukuthuthukiswa okwengeziwe nokuhlanganiswa.
Ama-Pirate Metrics ikusiza ukwenza ukuhlaziywa kokulinganisa nokuqhathanisa kwebhizinisi lakho ngokulandela amamethrikhi ayisihlanu (AARRR):
Ukuzuza - Uthola umsebenzisi. Ngomkhiqizo we-SaaS, lokhu ngokuvamile kusho ukubhalisa.
Ukuqalisa - Umsebenzisi usebenzisa umkhiqizo wakho, ekhombisa ukuvakashelwa okuhle okokuqala.
Ukugcinwa - Umsebenzisi uyaqhubeka nokusebenzisa umkhiqizo wakho, ekhombisa ukuthi bayawuthanda umkhiqizo wakho.
Ukudluliselwa - Umsebenzisi uwuthanda kakhulu umkhiqizo wakho ubhekisa kwabanye abasebenzisi abasha.
Imali engenayo - Umsebenzisi uyakukhokhela.
Ama-Pirate Metrics kusekelwe ngokukhululekile kufayela le- Startup Metrics for Pirates inkulumo kaDave McClure, kepha abathuthukisi bebengafuni nje ukwenza ithuluzi lokuhlaziya elizolandelela lapho kwenzeka izinto ezithokozisayo. Baklame amaPirate Metrics ukusiza ukuxazulula enye inkinga, okuyi ukumaketha uhlelo lwewebhu.
Ama-Pirate Metrics iqoqa amamethrikhi ayisi-5 abe yiviki leqoqo, bese uqhathanisa lelo viki ngokuqhathaniswa nesilinganiso sokugingqika. Ngokwenza inothi ngemisebenzi yokumaketha eyenziwe phakathi nesonto (ukwenza umkhankaso wesikhangiso, i-A / B ukuhlola isakhiwo sakho sentengo, njll) ungasho kalula ukuthi yimiphi imisebenzi ethuthukisa I-AARRR amanani.
Ama-Pirate Metrics futhi kukhiqiza umbiko wokumaketha ovuselelwa ngokuqhubekayo. Embikweni wokumaketha, babheka amaphethini ekuziphatheni kwabasebenzisi bakho, bese banikeza izeluleko ngezindlela zokuthuthukisa izinombolo zakho ze-AARRR.
Umbiko wokumaketha ugxila kakhulu ezibalweni zakho ze-AARRR, futhi unikeze izeluleko ngezindlela zokwenza ngcono lezi zinombolo. Isibonelo, i-Pirate Metrics ikhomba abasebenzisi abangawenzi umsebenzi wakho obalulekile kusukela bagcina ukukhokhela insizakalo yakho, ngakho-ke ungaxhumana nabo ukuthola ukuthi banenkinga yini ngaphambi kokuthi bakhansele bengenaso isexwayiso. Ipulatifomu ibuye ikhombe ukuthi ngabe abasebenzisi abasebenza ngokunensa noma ngokushesha okukhulu ukwedlula isilinganiso sokugoqa babiza imali ethe xaxa, ngakho-ke ungathatha isinqumo esinolwazi lokuthi yiliphi iqembu ongagxila kulo emikhankasweni yakho yokumaketha.
Ayikho neze imikhiqizo eyenzelwe ngqo ukulandelela imicimbi ye-SaaS, ukuhlaziya leyo datha, bese unikeza izixazululo ezizosiza lelo bhizinisi ukwenza imali eningi. Ama-Pirate Metrics inikeza isilingo senyanga engu-1 esiqala lapho umsebenzisi omusha eqala ukusithumela idatha, nesakhiwo sentengo esigaxekile esiqala ku- $ 29.00 ngenyanga.
Tags: arrUkuthengaIzibalo ezenzekayoukusebenzaAma-Analyticsdave mcclureama-pirate metricsukudluliselwaukugcinwa
Izipho Zomphakathi kanye nohlu lwezifiso
I-Sendgine: Hlela Izitimela Zakho Zokucabanga